Factory Manager (For Mudon) at Trevo Company Limited | MyJobs
/ Factory Manager (For Mudon)
We are looking for an experienced Factory Manager to organize and oversee the manufacturing of goods. You will be ultimately responsible for the smooth running of all production lines and the quality of output.
· Factory တခုလုံးကိုကောင်းစွာအုပ်ချုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်
· သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ကုန်ကြမ်းများအချိန်မီရရှိရန်နှင့် ကုန်ကြမ်းပြတ်တောက် မှု မဖြစ်စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။
· ကုန်ကြမ်းများ အလေအလွင့်အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် လက်အောက်တာဝန်ခံများအား ကြီးကြပ်ညွှန်ကြား ရန်။
· Production Plan အရ လိုအပ်မည့်လုပ်သားအရေအတွက်နှင့် Time Schedule များရေးဆွဲရန်။
· လုပ်ငန်းကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန် လုပ်သားများနေရာချထားခြင်း၊ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ခွဲဝေခြင်း
· ကိစ္စများစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ခံများနှင့် ပူးပေါင်း၍ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ (SOP)ရေးဆွဲရန်။
· သတ်မှတ် Plan အတိုင်း ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရန်အတွက် စက်ပစ္စည်းများနေရာချထားမှု (Layout Plan) များရေးဆွဲရန်။
· စက်မောင်းနှင်သူများ အန္တရာယ်ကင်းစေရေးအတွက် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ (SOP) ရေးဆွဲရန်။
· ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပက်သက်၍ကုန်ပစ္စည်းများ သတ်မှတ်အရည်အသွေးပြည့်မှီစေရေး ၊ ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေရေး။
· သတ်မှတ်အရေအတွက်အတိုင်း ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးတို့အတွက် ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံး ဆောင်ရွက် ရမည့်နည်းလမ်း အဆင့်ဆင့် (Standard operating procedure) များသတ်မှတ်ရေးဆွဲရန်။
· အထက်အရာရှိ ပုံမှန်အစီရင်ခံခြင်း၊ လိုအပ်သလို ကြားဖြတ်အစီရင်ခံခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။
· တင်ပြအစီရင်ခံရာတွင် နေ့စဉ်နှင့် လစဉ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ( Daily & Monthly Production Report) ၊ ကုန်ကြမ်းသုံးစွဲမှုအခြေအနေ (Usage of Raw Materials Report)၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်များ (Work Plan) ၊ အရည်အသွေး ပြည့်မီမှု (Quality Control ) အချက်အလက်စာရင်း ဇယားများ ပြုစုတင်ပြရန်။
· လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ရုံးချုပ်မှပေးပိုသည့် လုပ်ငန်းသုံးငွေများကိလည်း လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ ထုတ်ပေးရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်။
· မိမိလုပ်ငန်းငန်းနှင် ဆက်သွယ်နေ့သည့် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ မြို့နယ်အဆင့်၊ခရိုင်အဆင့်၊ ပြည်နယ်အဆင့်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့်လည်း လိုအပ်သလိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်။
· တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်
· စက်ရုံကို ကောင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်
· Manufacturing industry မှာ လုပ်သက် အနည်းဆုံး ၅ နှစ်ကနေ ၁၀ ကြား ရှိရမည်
· Computer သုံးနိုင်ရမည်။ အလုပ်ဖိအားကိုခံနိုင်ရမည်။
· Leadership skill ရှိပြီး teamwork ဖြင့် ကောင်းစွာလုပ်နိုင်သူ မိမိ team ကိုကောင်းစွာ ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။